ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြိုင်ကြီးငူဘုန်းကြီးဦးသုဇန | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Aung San Suu Kyi loses her gloss for failing to denounce killings
Time to stamp out racism »
ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြိုင်ကြီးငူဘုန်းကြီးဦးသုဇန
မြန် မာမွ တ် စလင် မ် မီဒီ ယာ (MMM)
နအဖ စစ် တပ်နှင့် ဆက်သွ ယ်သည့် သက်သေများ နအဖ စစ် တပ်နှင့် ဆက်သွ ယ်သည့် သက်သေများနအဖ စစ် တပ်နှင့် ဆက်သွ ယ်သည့် သက်သေများ နအဖ စစ် တပ်နှင့် ဆက်သွ ယ်သည့် သက်သေများ KNLA တပ် မဟာ (၇) တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် စဉ် က မြို့နယ်အု ပ်ချုပ်ရေးမှုးဖြစ်ခဲ့ သောတီးချား၊ ဒုဗိုလ် များဖြစ်သော ဗိုလ်ပြား (ယခုDKBA 555 တပ် မှုး)၊ ဗိုလ်မောင်ကြည်၊ ဗိုလ်ချာတိ တ် များကိုရှေ့တန်းတစ်နေရာတွင်န၀တ စစ်အရာရှိနှင့် လျို့ဝှ က် စွာတွေ့ဆုံရန်ဦးသုဇနက စီ စဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၄င်းလု ပ်ဆောင်ချက် ကိုစစ်ဥပဒေ နားလည်သော ယခု လက်ရှိDKBA တပ် မှုးများ၊ ခေါင်းဆောင် များ ပြန် လည်သုံးသပ် ပါက ဦးသုဇန ၏ သရု ပ် မှန် ကိုပုံဖေါ်မြင်နိုင် ပါသည်။ ကိုယ်ရည်သွေးအမွန်း တင်သည့်စည်းရုံးရေး ကိုယ်ရည်သွေးအမွန်း တင်သည့်စည်းရုံးရေး ကိုယ်ရည်သွေးအမွန်း တင်သည့်စည်းရုံးရေး ကိုယ်ရည်သွေးအမွန်း တင်သည့်စည်းရုံးရေးဝ ၀၀ ၀ါဒမျာါးဒမျာါးဒမျာါးဒများKNLA ရဲဘော် များကိုစည်းရုံးခဲ့စဉ်“ ပီးဆေး” လည်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဒု တ် ပီး၊ဒါးပီး၊ သေနတ် ပီးဆေး သည်ရဲဘော် များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်းမေတ္တာတရား ဦးထိ ပ် ထားရသည့်သာသနာလု ပ်ငန်းသည်၎င်းပီးဆေး နှင့် ဆန့်  ကျင် ဖက်ဖြစ်သည်ဆိုသည့် ပြောဆိုသံ များကြောင့်ပီးဆေးကို“ဘုန်းကြီးဆေး” ဟုပြန် လည်ခေါ်ဝေါ်စေခဲ့ သည်။ ၄င်းဆေးကိုသောက် ပါက မျက် လုံးများ နီ လာ သဖြင့် ရဲဘော် များ အဟု တ် ထင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် လည်း၎င်းဆေးသည်ပြောသည့် အတိုင်းအမှန်တကယ် စွ မ်းကြောင်းယခု ချိန် ထိ သက်သေသာဓကပြစရာ တစ်ခု မှ မရှိခဲ့ပါ။
KNLA တပ် မဟာ (၇) ကိုတိုက် စဉ် ကDKBA ရဲဘော် များ ရာနှင့် ချီ ကျဆုံးသည် ကိုထောက်ခြင်းဖြင့် တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွ က်၊ တစ်စခန်းဝင်တစ် စခန်းထွ က်ချေကျင်လျှောက်အပင် ပန်းခံပြီးဘုန်းကြီးဆေး လိုက်တိုက်ခဲ့ဲ့ သော ဆရာတော်ဦးသုဇန ၏ ရည်ရွ ယ်ချက်ကိုDKBA ရဲဘော် များ မေးခွန်းထု တ်သင့်ပါပြီ။ဦးသုဇန ၏ပါးစပ် ထဲသို့သေနတ်ပြောင်းထည့်ပစ် ပါ က ကျည် မပေါက်ကြောင်းလည်းဝါဒဖြန့် ခဲ့ သလိုမိ မိသွားလိုသော နေရာကိုစိ တ် ကူးလိုက်ရုံဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းဝါဒဖြန့်  မှုများကိုသက်သေပြခိုင်းသင့်ပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဆန့်  ကျင်သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဆန့်  ကျင်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဆန့်  ကျင်သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဆန့်  ကျင်သည့် ဝ ၀၀ ၀ိနည်းမျာိးနည်းမျာိးနည်းမျာိးနည်းများDKBA ဖွဲ့  စည်းစဉ် က လူ မျိုး နှင့် သာသနာကိုလက်နက် ကိုင် စွဲ၍ ကာကွ ယ် မည် ဟုကြေညာခဲ့ပါသည်။ သို့သော် လည်းအဖွဲ့သားများ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ခြင်းကိုလုံးဝမတားမြစ်ခဲ့ပါ။ တစ်ဆင့် တက်ပြီးထု တ် လု ပ်သည့် အဆင့် ရောက်သော် လည်းမတားမြစ်ခဲ့ပါ။ ဦးသုဇနအလှုလု ပ် လိုပါက ညာလက်ရုံး တစ်ဦးဖြစ်သော ဗိုလ် မု တ်သုန်ကိုငွေရှာခိုင်းလေ့ရှိပါသည်။ ဗိုလ် မု တ်သုန်သည် မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအဓိ က ထု တ် လု ပ်ဖြန့် ဖြူးသူ ဖြစ်ပြီးထိုင်းအာဏာပိုင် မှအလိုရှိနေသူ တစ်ဦးဖြစ် ပါသည်။ လှိုင်းဘွဲမြို့ တောင်ပြုန်းကျောင်းတွင် မိန်းမ (၆) ယောက်ယူ ထားသော ဘုန်းကြီးတစ် ပါးရှိပါသည်။ ၄င်းဘုန်းကြီးက ဦးသုဇန ကိုပြောခဲ့ ဘူးပါသည်။ “ ““ “ငါဟာမိန်းမငါဟာမိန်းမငါဟာမိန်းမ ငါဟာမိန်းမ ((((၇ ၇၇ ၇)))) ယောက် ထိ ယူရမယ်။ ခု ယောက် ထိ ယူရမယ်။ ခု ယောက် ထိ ယူရမယ်။ ခု ယောက် ထိ ယူရမယ်။ ခု( (((၆ ၆၆ ၆)))) ယောက်ဘဲရှိသေးတယ် ယောက်ဘဲရှိသေးတယ်ယောက်ဘဲရှိသေးတယ် ယောက်ဘဲရှိသေးတယ်” ”” ” DKBA ရဲဘော် များက ၀ိနည်းနှင့် ဆန့်  ကျင်ပြီးသာသနာကိုစွန်းထင်းစေသော ၄င်းဘုန်းကြီးကိုအရေးယူချင်သဖြင့် ဦးသုဇန တွင်ခွင့် တောင်းရာ ဦးသုဇနမှ မိန့် ကြားသည် မှာ-
“ လူ များစားသောက် တတ် လူ များစားသောက် တတ် လူ များစားသောက် တတ် လူ များစားသောက် တတ်
ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြိုင်ကြီးငူဘုန်းကြီးဦးသုဇန အကြောင်း
မြန် မာမွ တ် စလင် မ် မီဒီ ယာ
လို့စားတာ စားပါစေ၊ သွားမရှုတ်နှင့်လို့စားတာ စားပါစေ၊ သွားမရှုတ်နှင့်လို့စားတာ စားပါစေ၊ သွားမရှုတ်နှင့်လို့စားတာ စားပါစေ၊ သွားမရှုတ်နှင့် ” ”” ” ဟု ဖြေကြားသဖြင့် ရဲဘော် များ၊ ရွာသား များစွာအံသြနေရပါသည်။ ထို့ပြင်၂၀၀၇ ရွှေ ၀ါရောင်တော် လှန်ရေး၊ မြန် မာတစ်နိုင်ငံ လုံး ကြည်ငြိုသော သာမညဆရာတော် အလောင်းဖျက်ဆီးမှုများကိုလေ့ လာပါက လက်နက် စွဲ ကိုင်ပြီးသာသနာကိုကာကွယ် မည်ကြွေးကြော် ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်သလိုဘုန်းကြီးအစစ် ဟု တ် မဟုတ်DKBA ရဲဘော်များ စမ်းစစ်သင့်ပါပြီ။
လက်နက် ကိုင်ပြီးသာသနာကိုကာကွ ယ်ခြင်းလော၊သို့ မဟု တ်သာသနာ ပျက် စီးခြင်းကိုလက်နက် လက်နက် ကိုင်ပြီးသာသနာကိုကာကွ ယ်ခြင်းလော၊သို့ မဟု တ်သာသနာ ပျက် စီးခြင်းကိုလက်နက် လက်နက် ကိုင်ပြီးသာသနာကိုကာကွ ယ်ခြင်းလော၊သို့ မဟု တ်သာသနာ ပျက် စီးခြင်းကိုလက်နက် လက်နက် ကိုင်ပြီးသာသနာကိုကာကွ ယ်ခြင်းလော၊သို့ မဟု တ်သာသနာ ပျက် စီးခြင်းကိုလက်နက် အားကိုးဖြင့် ဖုံးကွ ယ်ခြင်းလော အားကိုးဖြင့် ဖုံးကွ ယ်ခြင်းလောအားကိုးဖြင့် ဖုံးကွ ယ်ခြင်းလော အားကိုးဖြင့် ဖုံးကွ ယ်ခြင်းလော?” ?” ?” ?” သိမြင်သူ များနားလည် တတ် ပါစေ….. ဦးသုဇန၏အိ မ် မက် များ ဦးသုဇန၏အိ မ် မက် များဦးသုဇန၏အိ မ် မက် များ ဦးသုဇန၏အိ မ် မက် များ ဦးသုဇန သည်KNU စစ် စခန်းနားတောင် ကုန်းပေါ်တွင်စေတီ တည်ခြင်းများမှပြဿနာစတင်ခဲ့ပါသည်။ KNU ဌာနချုပ်မာနယ် ပလော နားရှိတောင် ကုန်းပေါ်တွင် စေတီတည်ရမည် ဟုအိ မ် မက်မက်သည် ဟု တပည့် တော် များကိုပြောခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတောင် ကုန်းသည် စစ်သေနင်္ဂဗျုဟာအရ အချက်အချာကျ သလိုရန်သူအမြှောက် တပ် ကိုပစ် မှ တ်အမှ တ်အသားပေးရာ ရောက်ကြောင်းKNU ခေါင်းဆောင် များမှ ဖျောင်းဖျပြီးအခြားနေရာ တွင်စေတီတည်ရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ သော်လည်းဦးသုဇန သည်လုံးဝ လက် မ ခံဘဲမိ မိ၏ အိ မ် မက်အတိုင်းစေတီ တည်ပြီးသာသနာပြန့်  ပွားရေးလု ပ်ရမည် ဟုနောက်လိုက် များကိုညွန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ယခု မာနယ် ပလောကျပြီးဖြစ်သော် လည်းယခု မာနယ် ပလောကျပြီးဖြစ်သော် လည်းယခု မာနယ် ပလောကျပြီးဖြစ်သော် လည်းယခု မာနယ် ပလောကျပြီးဖြစ်သော် လည်း၎ ၄၄၄င်းနေရာကိုစေတီ တည်ပြီးသာသနာပြန့်  ပွားရေးကိုမလု ပ်ဘဲ င်းနေရာကိုစေတီ တည်ပြီးသာသနာပြန့်  ပွားရေးကိုမလု ပ်ဘဲင်းနေရာကိုစေတီ တည်ပြီးသာသနာပြန့်  ပွားရေးကိုမလု ပ်ဘဲ င်းနေရာကိုစေတီ တည်ပြီးသာသနာပြန့်  ပွားရေးကိုမလု ပ်ဘဲ ဘားအံမြို့နားမှာရှိသော မြိုင်ကြီးငူ တွင်ခြေစိုက်သည် ကိုကြည့် ခြင်းဖြင့် ဦးသုဇနလု ပ်ရပ်သည်န ဘားအံမြို့နားမှာရှိသော မြိုင်ကြီးငူ တွင်ခြေစိုက်သည် ကိုကြည့် ခြင်းဖြင့် ဦးသုဇနလု ပ်ရပ်သည်နဘားအံမြို့နားမှာရှိသော မြိုင်ကြီးငူ တွင်ခြေစိုက်သည် ကိုကြည့် ခြင်းဖြင့် ဦးသုဇနလု ပ်ရပ်သည်န ဘားအံမြို့နားမှာရှိသော မြိုင်ကြီးငူ တွင်ခြေစိုက်သည် ကိုကြည့် ခြင်းဖြင့် ဦးသုဇနလု ပ်ရပ်သည်န၀ ၀၀ ၀တ၏ တ၏ တ၏ တ၏ထောက် လှ မ်းရေးဖြစ်ကြောင်းသက်သေသာဓက တစ်ခုဖြစ်နေပါသည်။ ထောက် လှ မ်းရေးဖြစ်ကြောင်းသက်သေသာဓက တစ်ခုဖြစ်နေပါသည်။ထောက် လှ မ်းရေးဖြစ်ကြောင်းသက်သေသာဓက တစ်ခုဖြစ်နေပါသည်။ ထောက် လှ မ်းရေးဖြစ်ကြောင်းသက်သေသာဓက တစ်ခုဖြစ်နေပါသည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့နယ်၊ ကတိုင် တိ ကျေးရွာမှအစ္စ လာမ်ဘာသာဝင် များ ၀တ်ပြုရာ နှ စ်ပေါင်း၁၀၀ ကျော်မှဗလီကြီးအား (၂.၅.၀၉) ရက်နေ့မနက်(၇း၁၅) မိနစ်အချိန် တွင်DKBA တပ်သား ၁၀ ဦးနှင့်အရပ်သား ၅၀ ခန့် ရောက်ရှိလာပြီးဦးသုဇန၏ညွန်ကြားချက်အတိုင်းဖြိုဖျက်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းပြဿနာ သည် လည်းဦးသုဇန၏ အိ မ် မက်မှ စတင်ခဲ့ပါသည်။အိ မ် မက်အရ ဗလီ၏အောက်ခြေတွင်ဘုရားငု တ် တိုရှိသည် ဟုအိ ပ် မက်မက်ပြန်သည်။ဗလီ ကိုဖျက်ပြီးသော် လည်းဘုရားငု တ် တိုကိုရှာ၍ မတွေ့ ခဲ့ပါ။ ထိုစဉ် က အစိုးရအသိ မှ တ်ပြု အစ္စ လာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးများမှပူးပေါင်း၍ သက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြခဲ့ သော် လည်းကရင်ပြည်နယ်ပ.ရ.က ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော် မင်းက “ဆရာတော်သိ ပ် လိုချင်ရင် ပေးလိုက် ပါ” ဟူဆိုပြီးဥပဒေကိုမထီ မဲ့ မြင်ပြုကာ ဦးသုဇနဖက် မှရပ် တည်ခဲ့ သည် ကိုထောက်ခြင်းဖြင့်နအဖ နှင့် တစ် ဖက် တည်းရပ် တည်ကြောင်းပေါ်လွင် ပါသည်။ ယခင် ကလည်းနှဘူးကျေးရွာနှင့်သခွ တ် ဖိုး ကျေးရွာများရှိဗလီ ၀တ်ကျောင်းတော်၂ လုံးအားလည်းဦးသုဇန ၏အိ မ် မက်အရ ဖျက် စီးခဲ့ ပြီးဖြစ် ပါသည်။
အဆိုပါ အစ္စ လာမ်ဘာသာဗလီ များဖျက် စီးမူနှင့်ပတ်သက်သော ဦးသုဇန၏ ထု တ်ပြန်ချက် များ ဘာသာရေးအဖွဲ့များ၏ တင်ပြချက် များကိုအောက် တွင်ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ရန်
မြန် မာမွ တ် စလင် မ်မီဒီ ယာမှ ပူးတွဲတင်ပြလိုက် ပါသည်
ဦးသုဇန၏ အမှ တ် တမဲ့ဦးသုဇန၏ အမှ တ် တမဲ့ ဦးသုဇန၏ အမှ တ် တမဲ့ဦးသုဇန၏ အမှ တ် တမဲ့ ဝ ၀၀ ၀န်ခံချက်န်ခံချက်န်ခံချက် န်ခံချက်မြစ်ဆုံပြဿမဖြစ်ခင်KNU ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စောဘိုမြ မှဦးသုဇန ကိုတွေ့ ဆုံပြီးဖျောင်းဖျသည် မှာ-
ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဘုန်းကြီး… ……… ဒီ လိုအရမ်းမလု ပ် ပါနဲ့ ၊ ကျနော် တို့ ကရင်အချင်းချင်းစည်းလုံးရမယ်၊ ရန်သူ က ဘုန်းကြီးကိုဒီ လိုအရမ်းမလု ပ် ပါနဲ့ ၊ ကျနော် တို့ ကရင်အချင်းချင်းစည်းလုံးရမယ်၊ ရန်သူ က ဘုန်းကြီးကိုဒီ လိုအရမ်းမလု ပ် ပါနဲ့ ၊ ကျနော် တို့ ကရင်အချင်းချင်းစည်းလုံးရမယ်၊ ရန်သူ က ဘုန်းကြီးကိုဒီ လိုအရမ်းမလု ပ် ပါနဲ့ ၊ ကျနော် တို့ ကရင်အချင်းချင်းစည်းလုံးရမယ်၊ ရန်သူ က ဘုန်းကြီးကိုခိုင်းတယ်။ ဘုန်းကြီးလိုက် လု ပ် တာမကောင်းပါဘူး။ ဒီ လိုမလု ပ် ပါနဲ့ တော့။ ခိုင်းတယ်။ ဘုန်းကြီးလိုက် လု ပ် တာမကောင်းပါဘူး။ ဒီ လိုမလု ပ် ပါနဲ့ တော့။ခိုင်းတယ်။ ဘုန်းကြီးလိုက် လု ပ် တာမကောင်းပါဘူး။ ဒီ လိုမလု ပ် ပါနဲ့ တော့။ ခိုင်းတယ်။ ဘုန်းကြီးလိုက် လု ပ် တာမကောင်းပါဘူး။ ဒီ လိုမလု ပ် ပါနဲ့ တော့။” ”” ” ထိုအခါ ဦးသုဇနမှပြန် လည်မိန့် ကြားသည် မှာ-
အိုအိုအိုအို………… ဘုန်းကြီးမလု ပ်တော့ ပါဘူးဘုန်းကြီးမလု ပ်တော့ ပါဘူးဘုန်းကြီးမလု ပ်တော့ ပါဘူးဘုန်းကြီးမလု ပ်တော့ ပါဘူး” ”” ” ဦးသုဇန ၏ မိန့် ကြားချက် တွင်ရန်သူန၀တ ၏ခိုင်းစေချက်အတိုင်းလု ပ်နေသည် ကိုဝန်ခံခဲ့ပါသည်။ ယခု လည်းဦးသုဇန ဦးဆောင်ပြီးငြိ မ်းချမ်းရေး စကားကမ်းလှ မ်းမှုသည်၇န်သူနအဖ ၏ စေခိုင်းချက် ပါမပါ KNU အနေဖြင့် လေးနက် စွာကိုင် တွ ယ် စီ စစ်ရန် လို ပါသည်။ ကျန်ရှိသော ရာပေါင်းများစွာသော် DKBA ရဲဘော် များကိုထောက်၍ ငြိ မ်းချမ်းရေးကိုအလေးအနက်ထားပြီးKNU အနေဖြင့် ထိရောက် စွာကြိုးစားသင့် သလိုငြိ မ်းချမ်းရေးကိုဘမ်းပြပြီးအနီးကပ် ဓါးထိုးခံရသည့် အဖြစ် မျိုးမကြုံအောင်KNU ဖက် မှ လည်းကြိုတင် ကာကွ ယ်ရေးအစီအမံများ ထားရှိသင့်ပါသည်။ DKBA အနေနှင့်လည်းငြိ မ်းချမ်းရေး ကိုအမှန် တကယ်လိုလားပါက ခေါင်းဆောင်အစစ်အမှန် ကိုရွေးထု တ်ပြီး၊ ရိုးသားမှုကိုသာဓက အ ထောက်အထားပြ ၍ ငြိ မ်းချမ်းရေးကိုရယူသင့်ပါပြီ။ အသေ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပဏ္ဍိ တာနဉ္စသေ၀နာ။ ပူဇာ စ ပူဇနေယျာနံ၊ ဧတံမင်္ဂ လ မု တ္တ မံ။ သူ မိုက် ကိုမမှီဝဲ မဆည်းကပ်ခြင်း၊ပညာရှိသူ ကိုမှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်း၊ပူဇော် ထိုက်သူ ကိုပူဇော်ခြင်း၊ မေတ္တာဖြင့်ဖူးဒိုဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၀၉
ကရင်ပြည်နယ်ဖါပွန်မြို့ ကတိုင် တိကျေးရွာကိ စ္စအား ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းများမှဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ ထံတင်ပြ အကူအညီတောင်းခံသည့်စာ။ အဆိုပါတိုင်ကြားမူအား စစ်အစိုးရမှတစ် စုံတစ်ရာ အရေးယူဆောင်ရွ က်ခြင်းမရှိရုံမျှမက ကရင်ပြည်နယ်ပ.ရ.က ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ် ဇော် မင်းက “ဆရာတော် သိ ပ် လိုချင်ရင်ပေးလိုက် ပါ” ဟူဆိုပြီးဥပဒေကိုမထီ မဲ့ မြင်ပြုကာ ဦးသုဇနဖက် မှရပ် တည်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကိ စ္စအား ပြည် ပရောက်မွ တ် စလင် မ်နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများသို့ တင်ပြ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ သော် လည်းထိရောက် စွာဟန့်  တားနိုင်ရန်ပင် မဆိုထားနှင့်ကန့်  ကွ က်ကြောင်းထု တ်ပြန်ချက် တစ် စုံတစ်ရာ ပင် မရရှိခဲ့ ချေ။ ပြည် တွင်းနယ် စပ်ဒေသများရှိမွ တ် စလင် မ် များ၏ အခြေအနေမှာကြောက် မက် ဖွ ယ်ကောင်းလောက်အောင် ပင်မျက် ကွ ယ်ပြုခဲ့ထားရကာ မျိုးဖြုတ်သု တ်သင်ခြင်းအန္တရယ်ကြီးမားစွာရှိနေလျက်ရှိပါသည်။
(Myanmar Muslim Media )
Tags: Burma, Democratic Karen Buddhist Army, Karen National Liberation Army, Karen National Union, Kayin State, Muslim, Salween River, Yangon
This entry was posted on May 19, 2013 at 2:54 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.